Igodo nke ịhọrọ mkpuchi mkpuchi | Bezzia
Igodo maka ịhọrọ akwa
Maria onyekwere | 14/09/2021 12:00 | Home
Nordic ochie gị ọ na -ama ụfụ ikpeazụ ya na ọ baghịzi uru iziga ya ebe a na -asa ákwà ọzọ? Ị nwere ime ụlọ ọhụrụ ma chọọ iji njupụta Nordic dochie ihe ndina gị? Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị ihu ịzụta a duvet, ị ga -achọ ụfọdụ igodo iji mara ka esi ahọrọ nke dabara adaba.
Enwere ohere dị iche iche ma a bịa n'ịzụrụ Nordic. Kedu ka esi mara mgbe ahụ, nke bụ nhọrọ kacha mma? Na Bezzia taa anyị na -anwa iduzi gị na usoro ịzụta a, na -akọwapụta ihe ị kwesịrị ile anya, gịnị ihe i kwesiri iburu n’uche iji zụọ ihe nke ọma.
1 Eke eke ma ọ bụ sịntetik?
1.1 Ihe na -ejupụta eke
1.2 Ihe na -eme sịntetik
2 The confection
Eke eke ma ọ bụ sịntetik?
Ihe dịanyā bụ ihe na -ekpebi ihe nweta ike mkpuchi zuru oke. Enwere ihe na -ejupụta eke na ihe nrụpụta sịntetị nke eriri ọdịnala, nke eriri polyester ma ọ bụ nke microfibers. Ịmara uru na ọghọm nke ngwa ọ bụla ga -enyere gị aka ime mkpebi mbụ gị.
Ihe na -ejupụta eke
Mgbe anyị na -ekwu maka imeju eke anyị na -ekwu maka nku ma ọ bụ ala. Njuputa nku Ha na -agụnye okpete na -eme ka ha dị arọ, na -adịchaghị mma maka mmetụ aka ma na -enye ha ike mkpuchi mkpuchi adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ala.
Njuputa ala ha dị ọkụ ma nwee ezigbo mkpuchi mkpuchi ọkụ. Ka ọ na -agbada elu na -eji njuputa, a na -emepụta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ikuku, nke ga -enye ohere mgbasa ka mma yana si otú a na -ekesa okpomọkụ ka mma na ikpochapu mmiri ngwa ngwa.
Iji mara ụdị mgbada agbada, a ga -eduzi anyị site na a otu ọkọlọtọ a maara dị ka Ike Jupụta. Nke a na -egosi olu nke nwere 28,35 g. gbadaa n'okpuru ọnọdụ ọkọlọtọ. Ya mere, ọ bụ ụzọ iji tụọ ịdị mma ya. Njuputa Nordic kachasị mma n'ahịa na -adịkarị na Ike jupụta nke 9 ma ọ bụ 10, na nha 10.
Uru ndị na -egbochi ihe nke ndochi ala eke doro anya, yabụ nhọrọ kachasị ọnụ ahịa n'ahịa. Onye ọzọ mana nwekwara ike ịkụda anyị mmụọ ịkụ nzọ n'ụdị ihe a: eziokwu na anyị ga -emerịrị ya gaa na igwe nhicha ihe iji hichaa ha.
Ihe na -eme sịntetik
Enwere ike iji ha mee eriri, polyester fibers ma ọ bụ microfibers. Ihe niile na -eku ume, na -egbochi mgbasa nke fungi ma bụrụ hypoallergenic. Microfiber na -ejuputa bụ nke kacha mma na -e downomi ala, ma na olu ma na -egbochi ike. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na maka otu arụmọrụ ọkụ na mkpuchi ọkụ, njupụta sịntetị ga -adị arọ karịa nke dị ala.
N'etiti nnukwu uru nke ihe nzacha sịntetị bụ ọnụ ahịa ya, dị ọnụ ala karịa nke duvets ala. Uru ọzọ dị na ya bụ ịdị mfe nke ịsa ahụ; si otu a bụrụ nhọrọ kacha ewu ewu n'ime ụlọ ụmụaka na / ma ọ bụ ụlọ nke abụọ.
Mepụta ụlọ ikuku n'ime ọwa mmiri bụ ihe dị mkpa iji meziwanye ikike ikpuchi ya. Na a na -ekesa njuputa ahụ n'usoro ihe niile dị na duvet bụ isi na ngwaahịa dị mma. Ihe owuwu diamond siri ike nke na-esi ike ga-emezu ebumnuche a. Duvet nke ejiri akwa 100% mee, nke na-enye ohere ka njupụta na-eku ume, yana ihe owuwu yiri nke diamond siri ike, bụ nhọrọ kacha mma.
"Ibu na gram akwụkwọ kwa square mita" Otu a ka RAE si akọwa grammage, okwu na -arụ ọrụ dị ka ihe atụ ike okpomoku nke duvet. Ka elu grammage, ka ọkụ dị elu. Iji họrọ nke dabara adaba, ọ ga -adị mkpa iburu n'uche ọnọdụ okpomọkụ nke ime ụlọ anyị na oke ahụ anyị.
Mgbe ọ bụla anyị na -ekwu maka ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ nke ọnọdụ okpomọkụ anaghị ada n'okpuru 180ºC, a grammage gburugburu 200g / m2 ọ ga -ezuru igbo mkpa anyị. N'ebe ndị oyi na -atụkarị ebe ọ na -anaghị agafe 15ºC, agbanyeghị, ọ nwere ike ịdị mkpa ka iburu duvet nwere ihe ruru 400g / m2.
Ugbu a ị dokwuola anya maka ntụnye aka ndị ị kwesịrị ile anya ka ịchọta duvet kacha dabara adaba?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Igodo maka ịhọrọ akwa
Ihe nzuzo nke alụmdi na nwunye: Usoro HBO ị ga -ahụ
Kuki nwere chocolate gbara ọchịchịrị, na -atọ ụtọ!